The bookmobile ndiyo rinopfungaira raibhurari kuwanikwa vagari vose.
It ane pamusoro 3500 nemazita okuremekedza imwe neimwe dzoro dziri enganonyorwa, mutikitivha nyaya uye mabhuku kwemakore ose. Kune mabhuku maCD kukwereta uye nhau Jukebox yaunogona kukopa mabhuku takasununguka MP3 format. Chitima bhazi bhuku uchida kukwereta, unogona, mhosva, kuigadzira kubva imwe raibhurari unotevera chijana.
The bookmobile aigara kushanyira Holm kamwe pamwedzi. munguva yechirimo 2016 – Chitatu 27/1 24/2 30/3 27/4 25/5.
12.20-12.30 udo 126
12.40-14.10 Anundgård, kuchikoro
Unoda bhazi achamira pane mumwe panzvimbo?
The bookmobile ane nguva yakawanda kuti kumativi Holmsjön. Saka imi vanoda kana mazano zvimwe kwamira, imi muri zvikuru nomufambi kwatiri runhare pa 060-19 18 28 kana bokbussen@sundsvall.se. New timetables nokuti Mobile raibhurari, uchawana även här.
Unoda kukwereta chinhu chinokosha?
Call bookmobile mudonzvo kana vana- uye vechidiki raibhurari kare pamusoro 060-19 18 28. Saka tine chokwadi kuti uzvitore uchida kukwereta. Unogonawo kurayira mabhuku pachine Via e-mail: bokbussen@sundsvall.se Uri kurasikirwa raibhurari kadhi, ticharamba kuzvironga zvakananga, panzvimbo, ari bhazi
17/2 -16 Holmbygden.se: The bookmobile “Mobibblan” – The tikaisa raibhurari
4/10 -12 Holmbygden.se: The bookmobile musarasa
bhani- uye vechidiki raibhurari:
Raibhurari Birgitta Ingebrand,
Driver / raibhurari Jan Åkerström.